Maxaa ka jira in Justin Trudeau uu quursi kala kulmay madaxda Hindiya? - BBC News Somali
Maxaa ka jira in Justin Trudeau uu quursi kala kulmay madaxda Hindiya?
Socdaalkii ugu horeeyey ee rasmi ah ayuu Ra'iisal wasaaaraha Canada Justin Trudeau ku marayaa dalka Hindiya, balse lama uusan kulmin soo dhaweyn diiran, taasoo aad uga duwan safarradii kale ee ku tagay dalal badan.
Inkastoo isaga iyo qoyskiisa ay heleen fursado ay ku booqdaan goobo taariikhi ah kuna galaan sawirro sida taalada Taj Mahal, haddana madaxda ugu sareysa ee Hindiya soo dhaweyn uma sameynin mas'uulkan.
Markii uu yimid caasimadda dalka ee Delhi, waxaa ku qaabilay garoonka diyaaradaha wasiir darajadiisu hooseyso, taasoo loo fasirtay liidnimo.
Ra'iisal wasaaraha Hindiya Narendra Modi, ayaa marar kala duwan si shakhsi ah u soo dhaweeyay hoggaamiyayaal shisheeye. Wuxuu ku caan baxey in madaxda dhigiisa ah uu gacan qaado, soo dhoweyn wanaagsanna u sameeyo.
Dhawaan ayey aheyd markii uu ku soo dhaweeyey gacan qaad iyo marxabeyn ra'iisal wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, oo Hindiya ku tagay safar rasmi ah bishii January.
Laakiin Mr Modi, ayaanan wali la kulmin ra'iisal wasaaraha Canada, iyadoo uu jooggo Trudeau labo maalmood.
Sidoo kale wuu maqnaa markii uu Trudeau booqashada ku tagay gobolka Gujarat ee uu Modi kasoo jeedo.
Arrinta la yaabka sii leh waxay tahay in madaxda soo dhaweynta ka gaabsatay uusan ahayn Modi oo kali ah.
Image caption Ra''isal wasaraaha israa'iil Benjamin Netanyahu (bidix) waxaa delhi ku soo dahweeyay dhigiisa Hindiye Narendra Modi
Markii uu Trudeau safarka ku tagey taalada Taj Mahal Axaddii, wararka qaar ee ay soo gudbinayaan warbaahinta ayaa sheegaya in madaxa maamulka Uttar Pradesh, oo ah halka ay ku taallo taalada, aanu tagin goobtaasi si uu u salaamo ra'iisal wasaaraha.
Waxaa sidoo kale meesha ka maqnaa kooxda safarada dibedda ku wehlin jirtay Mr Trudeau, oo loogga bartay sawirada, wararka iyo baraha bulshadu kuwada xiriirto ee internet-ka kusoo harqin jirey wararka socdaalka.
Sidaa darteed, miyey Hindiya ku kacsan tahay Justin Trudeau? Haddii ay sidaa tahay, maxey tahay sababtu?
"Haa, tani waa xushmo daro aad u weyn. In dhab ahaantii loo diro ra'iisal wasaaraha iyo qoyskiisa soo dhoweyntooda wasiir darajadiisu hooseyso, waa tixgelin la'aan aan geed looggu gamban," sidaasi waxaa BBC-da u sheegay qoraa ka faallooda dhanka dhaqaalaha ee Vivek Dehejia.
Mr Dehejia ayaa ku sheegay sababta aan si diiran looggu soo dhoweyn Trudeau iney tahay xubno kamid ah dowladdiisa oo isbaheysi dhaw la leh dhaq dhaqaaqa Sikh - Khalistan - kuwaasoo baadi goob ugu jira iney abuuraan wadan madax bannaan oo ay Sikh-ku yeeshaan, iyagoo ku badan gobolka dhaca dhanka waqooyi ee Punjab.
Masuuliyiinta Canada ayaa sidoo kale la xiriiriyey maleeshiyada gooni u goosadka ee Sikh iney mas'uul ka ahaayeen rididdii diyaaraddii Air India ee sanadkii 1985-tii oo 329 qof ay ku dhinteen.
"Xisbiga Trudeau ayaa si weyn ugu tiirsan codadka qurba joogta Sikh-ga heysata dhalashada Canada, iyadoo sikh-ga ku jira dowladdiisa ay yihiin kuwo ka tirsan dhaq dhaqaaqa gooni goosadka ee Khalistanis," ayuu yiri Dehejia.
Waxaa ku jira golaha wasiirada Turdeau afar asalkoodu Sikh yahay.
Haddii soo dhaweyn la'aanta ay arrintaa sabab u tahay, ma noqoenysa markii ugu horreysay oo dhaqdhaqaaqa gooni goosadka ee Khalistan uu sabab u noqdo dacaraynta xiriirka madaxda labada dal.
Ra'iisal wasaaraha Canada oo ilmo yar oo loogu magac daray qaabilay
Image caption Diblomaasiyiin ayaa ku dooday in arrinta socdaalka ra'iisal wasaaraha wax ka sheegisteeda laga badbadiyey
Madax sare oo lasoo doortey kana tirsan gobolka Punjab, ayaa ku gacan seyray inuu la kulmo wasiirka gaashaan dhiga Canada Harjit Sajjan bishii April ee sanadkii tagey, isagoo ku eedeeyey wasiirka inuu yahay qof la dhacsan una riyaaqo dhaq dhaqaaqa gooni goosadka ee Khalistani.
Ha yeeshee safiirkii hore ee Hindiya u fadhin jirey Canada, Vishnu Prakash, ayaa beeniyey in Trudeau aan la gaarsiin maqaamkii uu mudnaa, isagoo tilmaamey in Hindiya ay raacday markii ay soo dhoweyneysay ra'iisal wasaaraha dhammaan qawaaniinta diblomaasiyadda ee la isku raacsan yahay.
"Sida ku cad borotokoolka , waa in wasiir uu soo dhaweeyo marka uu imanayo dalka hoggaamiye shisheeye, taas ayaana lagula dhaqmay Trudeau," ayuu Prakash u sheegay BBC-da.
Wuxuu sheegay in Mr Modi kolkii hore madaxdii soo booqatay dalka uu u soo dhoweeyey si shaqsi ah, laakiin khasab maahan in mar waliba madaxda dalalka kale ee Hindiya imanaysa uu isagu gacan qaado marka ay garoonka kasoo dagayaan.
''Micnaheedu maahan in ra'iisal wasaaraha aanu qaabileyn Trudeau. Waxaa jiri doonta soo dhoweyn dowladeed, taasoo loo qaban doono 23-ka February, halkaasi ayeyna isku arki doonaan", ayuu hadalkiisa raaciyey.
Diblomaasi hore oo Hindiya u dhashay laguna magacaabo Kanwal Sibal, ayaa u sheegay BBC-da in ay tahay khalad siyaasadeed iyo mid xirfadeedba habka uu dalkiisu ku qaabilay Trudeau iyo sida ay arrinta Khalistan u xumeysay xaaladda, iyadoo safarka ra'iisal wasaaraha oo ah mid sare loo isticmaali karey in lagu xuso walaaca ay dowladda Hindiya ka qabto kooxda gooni u goosadka ee Khalistan.
Image caption Wasiirka difaaca Canada Harjit Sajjan qaabilaad wanaagsan isagana ma helin
"Waa dhab runtii marka la eego sababo badan oo siyaasadeed oo daakhili ah in Hindiya aanay helin gacantii ay u baahneyd ee ay arrintani kula tacaali laheyd, laakiin waxaa loo isticmaali karayey socdaalka Trudeau in dowladda Hindiya ay ka hesho balanqaad iyo ficilo dhab ah dowladda Canada," ayuu yiri.
Sibal, ayaa sidoo kale sheegay inuu aaminsan yahay in Hindiya aysan quursan ra'iisal wasaare Trudeau, isagoo tilmaamey in xiriirka labadda dal uu soo hagaagayey waa yadan danbe, iyadoo heshiiskii Nukliyeerka ee ay dhawaan saxiixdeen inay calaamad u tahay iney wada leeyihiin dano mideeya.
Canada ayaa ku dhawaaqdey iney siineyso uranium India sanadkii 2015-kii, taasoo la rumeysan yahay iney aheyd talaabo horey looggu qaadey wanaajinta xiriirka labadda qaran.
Mr Sibal ayaa sheegay in arrinta socdaalka ra'iisal wasaaraha wax ka sheegisteeda laga badbadiyey.
"Tani waa hanaan diblomaasiyadeed oo caadi ah. Midkoodna ma doonayo in xiriirkooda dhaawac soo gaaro iyagoo og in haatan lagu guda jiro safar shaqo oo rasmi ah. Waa danta labada dal iney hubiyaan in socdaalka Trudeau uu ku dhamaado mid guul ah," ayuu sii raaciyey Sibal.